Challenge The Good News Paper - Hupenyu hwangu hwanga hwakaoma zvikuru (Shona)
Kay anoti "Ndatambura zvikuru pano panyika handidi kuendazwe kugehena". Ndakakurira mumhuri yaiva huru kwazvo zvokuti taimboshaya chokudya, munguva pfupi baba namai ndokurambana, murume akazowana mai vangu ndokundibata chibaro.
Kay akawanikwa aine makore gumi nemanomwe, murume wake ndokushaika mushure memakore gumi, akamusiira vana vatatu.
Ipapo akatonga kuti zvechipfambi nokunwa doro senzira yekuzvi nyaradza. Mugore ra2006 Kay akaendawo kukereke neshamwari yake kwavakaparidzwa namfundisi aibva kuZambia. Ndiko kwaakanonzwa shoko rakashandura hupenyu hwake.
Kay anopupura kuti "hupenyu hwandai rarama hwakanga husina rugare asi Mwari vakaregerera zvivi zvangu. Vakandi batsira kuti ndikunde zvivi zvangu, zvekubatikana panezvinodhaka uye nekureva nhema. Ndakakwanisawo kuregererwa nehama dzangu, nhasi uno ndavekuita zvinofadza Mwari.
Mateu 7:21 ndiyo ndima inokoshera Kay zvikuru nokuti inomu rangaridza kuti haasi munhu wese anoti Mwari Mwari achaenda kudenga.
Kay anoti "Ndafunga kuti kuenda kukereke ndiko kuzvarwa patsva, ndakazoziva kuti kuva muKristu inzira yokuzvipira kuraramira Kristu kwete kuenda kukereke ".
Kay anokurudzira vamwe kuti "Tendeukai mutarise kuna Kristu chete nokuti ndiye anoponesa hazvinei nemamiriro ezvinhu.•
<< My life was hell on earth
Adulterer finds God on a train >>